မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Jang Keun Suk နဲ့တစ်ညတာ (သို့) Fan meeting Part 1
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုကြည့်ရလို့ မဗေဒါကို ကျေးဇူးပါ..။
Your videos are very nice..Arr pay nay mae nor>> I saw you in yr videos..But, which one is your'sis, u talking about.Anyway, u r so pretty..
အဟတ်.. ဟတ်.. ကိုယ့်ဘလော့လေးပေါ်မှာပဲ စာသားလေးနဲ့ အသားယူခွင့်ရလို့.. ဒါလေးတော့ ခွေးလွှတ်ပါကွယ်.. အဲလေ.. ခွင့်လွှတ်ပါကွယ်...
မဗေဒါအစ်မ ဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ မှန်းကြည့်ပေ့ါကွယ်...
4/30/2010 11:07 PM
အေးလေ. . .
တစ်ညတာ ဆိုလို့ ရင်ခုန်သွားတာ . .ဟိဟိ.
မင်းသားတော့ သေပါပြီ ဆိုပြီး . .
ဗေဒါက ဝိတ်ကြီးတယ်လေ. . .
မဗေဒါ အမ ဆိုတာ မဗေဒါ အဖေရဲ့သမီးပေါ့. . ဒါများ မှန်းစရာလား . .မှန်းပါဘူး. .သူ့လိုပဲ နေမှာ . .
5/01/2010 2:29 AM
JKS ခုမှ သူမှန်းသိတာပါ။
ကိုယ့်မျက်စေ့ထဲ မန္တလေး သိန်းဇော်နဲ့ တူတယ် ထင်မိတယ်။
အပေါ်က ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ :D
5/01/2010 4:34 PM
အင်း... သူ့ ဆံပင်ပုံကြောင့် အဲလိုထင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်သလို...
မန္တလေး သိန်းဇော်ဘယ်လိုပုံလဲ မေ့နေတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
Ma Baydar, I m the one who asked which one is yr sis in above . But what did u reply? My com not have myanmar font.So so sorry...Arr pay nay mae nor...Jia you..
5/07/2010 3:31 PM
Thanks for cheering me. I just curious... if u don't have myanmar font, how did u read my post?
I replied to you saying "I will let you guess who is my sis :D " ...
I think it's pretty obvious. Thank you. :)
5/08/2010 8:50 PM
I was not really unable to read your reply above. I can read some of your past but some cannot. May be the myanmar font I installed was something wrong. So sorry for make you curious. This is the first time I came to your blog, that why I was really do't know who is yr sis. I have nothing to do with yr affairs nor your sis.Justareader of your blog. So, hope u don't mind for my quest made you remind or misunderstood with someone or something.So sorry..